Calaamadaha Bulshada, SEO, iyo Saameyntooda Midba midka kale | Martech Zone
Calaamadaha Bulshada, SEO, iyo Saameyntooda Midba midka kale
Matt Cutts wuxuu la wadaagay fiidiyoow halkaas oo uu uga hadlay caqabadda injineerada laga yaabo inay yeeshaan haddii ay abuuri lahaayeen ku-tiirsanaan udhaxeysa algorithms-ka Google darajooyinka iyo calaamadaha bulshada. Marka la soo koobo, waxay noqon laheyd mid aad khatar u ah in la dhiso ku tiirsanaantan haddii ay dhacdo barnaamijka kale ee warbaahinta bulshada midkoodna uu xannibo raadinta ama uu ku dhacay caan.
Shaki iigama jiro inay arintu sidan tahay, laakiin ka xanta ku adkee maaddaama xirfadleyda mashiinka raadinta ay inta badan arkaan xiriir ka dhexeeya mowduucyada bulsheed ee is beddelaya iyo qiimeynta mashiinka raadinta ee is beddelaya. Sida Matt ku celceliyay, taasi maahan sabab, in kastoo. Waxaan la wadaagnay fikradaheena ku saabsan saameynta warbaahinta bulshada ee SEO horeyba, laakiin aan ka wada hadalno calaamadaha bulshada iyo sida ay labadoodu isugu xidhan yihiin.
Taageerayaasha iyo Tirinta Raacayaasha - Haddii aad tahay hay'ad dhisan, caan ku ah warshadahaaga, fursadaha aad ayey u wanaagsan yihiin in lagugu qoro khadka tooska ah. Waxaa laga yaabaa inaad ka hadashey dhacdooyinka, wareysiyo aad sameysay, ama aad qortay qorshooyin, ama dadku tixraaceen shaqadaada. Mid ka mid ah sheegashooyinkaas, dabcan, wuxuu kuu kaxeyn doonaa labada xiriiriye adiga. Dabcan, ictiraafkaasi waxay u egtahay inuu wado wadashaqeyn toos ah oo toos ah khadka tooska ah haddii aad si firfircoon uga faa'iideysato warbaahinta bulshada. Socodka bulshada ayaa badanaa noqon kara faashad, taasoo ka dhigaysa tirintaas mid aan macquul aheyn in lagu daro darajada.
Saamiyada bulshada - Warbaahinta bulshada ayaa bixisa mid ka mid ah habka ugu wax ku oolka iyo waxtarka badan ee macluumaadka loogu wadaago khadka tooska ah ee shabakadaha ku habboon. La wadaag waxoogaa cilmi-baaris aasaasi ah oo aan caadi ahayn ama qayb ka mid ah waxyaabaha ku qanciya oo la yaabi maayo markay ku faafto sida dabka duurka oo ay gaarto dad aad u tiro badan. Saamiyada warbaahinta bulshada badanaa waa sida aan ku ogaado qalabka cusub ama daraasadaha, taas oo igu dhalisay inaan wax ka qoro iyaga oo aan soo saaro backlinks. In kasta oo qiyaasta sare ee wadaagga bulshada aysan keenin darajo, waxay ku xirnaan doontaa darajo weyn.
Sababtoo ah ma jiro xiriir toos ah macnaheedu maahan inaysan jirin wax saameyn ah, in kastoo. Haddii aan ka helo ilo ama barxad weyn raadinta, waxaan kula wadaagi doonaa xisaabahayga warbaahinta bulshada. Haddii aan ka helo aalad baraha bulshada oo aan la wadaago dhagaystayaashayda ballaadhan, waxay u badan tahay inay horseedi doonto maqaallo dheeri ah iyo backlinks oo wada darajada. Marka inkasta oo aysan jirin xiriir toos ah, haddana waxaa jira sababo aan toos ahayn oo kanaal kasta uu ku yeelan karo kan kale.
Isticmaalka labada kanaal waxay horumarin doontaa natiijooyinka kan kale. Ha iska indha tirin fursaddan! Halkan waxaa ku yaal talooyin aad u fiican Iskugeyn bulsho maareeyayaasha warbaahinta bulshada si ay ula jaan qaadaan istiraatiijiyado ku habboonaynta mashiinka raadinta.
Wadaagista Warbaahinta Bulshada ayaa sii kordheysa
Fasax.ly ayaa dhawaan soo saartay warbixin ah Facebook ayaa hadda ka adkaaday Google sida tixraaca ugu sareeya ee daabacayaasha. Hoos udhacani wuxuu muhiim u yahay daabacayaasha inay maanka ku hayaan. Haddii aad ku daadinayso dhammaan dadaalkaaga hagaajinta mashiinka raadinta iyo fursadaha gadaal, oo aadan horumarin istiraatiijiyad weyn oo warbaahinta bulshada ah, fursadaha lagu gaarayo dhagaystayaasha cusub ayaa hoos u dhacaya.
Tags: ayna search engineSEOcalaamadaha warbaahinta bulshadaistiraatiijiyadda warbaahinta bulshadaistiraatiijiyad wadaag bulshadacalaamadaha bulshadaistaraatiijiyada bulshada
LeadSift: Ku Qabso Fikradaha Muhiimka ah iyo Waxqabadka Waxqabadka leh ee Warbaahinta Bulshada
Khibrada Mobilada iyo Saamaynta ay ku leedahay Isbeddellada